यसअघिको एमाले–माओवादी झगडालाई घर झगडा सम्झेर अघि बढ्नु पर्छ – गणेश उप्रेती ‘सुशील’::Pathivara News
यसअघिको एमाले–माओवादी झगडालाई घर झगडा सम्झेर अघि बढ्नु पर्छ – गणेश उप्रेती ‘सुशील’
गणेश उप्रेती ‘सुशील’ नेकपा माओवादी केन्द्र मोरङका एक जुझारु र क्रियाशील युवा नेता हुन् । ०५३ सालदेखि क्रान्तिकारी विद्यार्थी हुँदै वामपन्थी राजनीतिमा हामफालेका उप्रेती ०५६ सालमा जेल परेका थिए । इलाम, विराटनगर, राजविराजको जेलमा दुई वर्ष यातना भोगेका उनी पार्टीमा ‘सुशील’ नामले चिनिन्छन् । विभिन्न समयमा गरी दुई पटक मोरङको माओवादी आन्दोलनको नेतृत्व सम्हालिसकेका उनी हाल पार्टीको पोलिटब्यूरो सदस्यको जिम्मेवारीमा छन् । पार्टीभित्रका कार्यकर्ताहरुलाई गम्भिर प्रशिक्षण दिन सक्ने उप्रेती विपक्षीलाई गतिलो प्रहार गरी भाषण गर्नेमा चर्चित छन् । पार्टीभित्र वौद्धिक एवम् वैचारिक नेताका रुपमा स्थापित उनी रतुवामाई–५ का स्थायी बासिन्दा हुन् । पार्टीको काम जस्तै उनी लेखनमा पनि उत्तिकै दख्खल राख्छन् । जनविद्रोह दैनिक पत्रिकाको सम्पादकसमेत भइसकेका उप्रेतीले आफ्नै एउटा कथासंग्रह प्रकाशित गरेका छन् । उनको अर्को कविता संग्रह प्रकाशनको तयारीमा छ । उनी साहित्यमा ‘शशीकिरण’ को नामले परिचित रहेका छन् । उनै बहुप्रतिभाका धनी नेता उप्रेतीसँग पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा पत्रकार सरोज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
नेपाली राजनीतिमा बाम एकता अहिले एउटा तरंग ल्याएको छ, यस विषयलाई कसरी नियाल्नु भएको छ ?
– अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा एउटा अत्यन्तै ऐतिहासिक र सान्दर्भिक काम हुन गइरहेको छ, बाम एकताको । झण्डै ७० प्रतिशत भन्दा बढी बामपन्थी जनमत भएकोे नेपालमा अहिलेसम्म बामपन्थीहरु विभाजित भएर नेपालमा स्थिर राजनीति अगाडि आउन सकेन । नेपालमा गणतन्त्र आइसकेको छ । र, अब हामीले माओवादी वा कम्युनिष्टहरुको भाषामा जनवादी क्रान्तिको एउटा चरण पूरा गरिसकेका छौं । अब हामी समाजबादतर्फ अघि बढ्नु पर्ने राजनीतिक अनिवार्यता छ । यो हिसाबले हेर्दा खेरी सबै बामपन्थीहरु एक ठाउँमा उभिएपछिमात्र समाजवादी क्रान्ति सम्भव छ । यो कुरालाई एमाले र माओवादी दुबै साइडका नेता तथा कार्यकर्ता सम्पूर्णले आत्मसाथ गरिसकेपछि अहिले हामी सुरुमा तालमेल र निर्वाचनपछि पार्टी एकता गरेर समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने गरी काम अघि बढाइरहेका छौं । अहिले यो प्रक्रियामा हामी गम्भिर रुपमा लागेका छौं ।
बाम एकताको सम्भावना तपाईंले कत्तिको देख्नु भएको छ ? र, अहिले घोषणा भए अनुसार माओवादी, एमाले र नयाँशक्तिबीच साँच्चिकै एकीकरण सम्भव छ त ?
– यो म मात्रै होइन, नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य जो आफूलाई भन्नु हुन्छ, एमाले होस् वा माओवादी त्यो अन्य बामपन्थीमा । जो समाजवादको सपना बुनेर कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य ग्रहण गरियो, त्यो सबैको खुशीको कुरा हो । बाम एकता हुनु पर्छ । सबै बामपन्थीहरु एक ठाउँमा उभिनु पर्छ । एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउनु पर्छ । त्यो पार्टीको नेतृत्वमा नेपालमा समाजवाद स्थापना गर्नुपर्छ, शोषणको अन्त्य गरिनु पर्छ । उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंगहरुको सबै खालको उत्पीडनको अन्त्य गरिनु पर्छ भनेर चाँही धेरै अघिदेखि भन्दै आएका छौं । त्यो सपना साकार पार्न एक ठाउँमा उभिनु पर्छ भन्ने महशुस भएपछि अब मुख्य पार्टी एमाले र माओबादी एक ठाउँमा उभिने एउटा जमर्को गरेको छ । यसले नेपालको बामपन्थी आकाशमा राम्रो सम्भावना बोकेको छ । यो प्रक्रिया अब अघि बढ्छ ।
भर्खरै पोलिटव्यूरो समितिको बैठक सकेर आउनु भएको छ, बैठकमा के कस्ता बिषयमा छलफल गर्नु भयो त ?
– बाम एकताको तालमेल सम्मेलन समिति बनिसकेपछि त्यसबिषयमा बिफ्रिङ गर्न बैठक बसेको थियो । बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा ‘बादल’ लगायतले आ–आफ्ना कुरा राख्नुभयो । उहाँहरुले अब नेपालमा बामपन्थी तालमेलको विकल्प छैन भन्नुभयो । हामी अगाडि बढ्छौं, समाजवादको नेतृत्व गर्न कम्युनिष्ट केन्द्र बनाएर अघि बढ्नु पर्छ, यसमा कसैले पनि तलमाथी गर्नु हुँदैन । एमाले र माओबादी छुट्टाछुट्टै धारबाट आएपनि अब एक भएर जानुको कुनै विकल्प छैन भन्ने बैठकमा एकमत भयो । समाजवादको बाटोमा जान जसले बाधा उत्पन्न गराउँछ त्यो इतिहासमा खरानी बनेर जानेछ । तसर्थ वाम एकतालाई अब कसैले रोक्न सक्दैन ।
नेताहरु माथिल्लो तहमा मिलेपनि तल्लो तहका पार्टी कार्यकर्ता निराश भएको जस्तो देखियो नि ? यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
– पहिलो कुरा त अहिलेसम्म तल्लो तहका कार्यकर्ताहरु निराश भएको मैले पाएको छैन । वाम एकताको कुराले तल्लो तहका कार्यकर्ताहरुमा निकै उत्साह भएको मैले पाएको छु । धेरै वर्षअघि बामपन्थी एकता हुनु पथ्र्याे भन्ने कुरा राख्नु भएको छ । बामपन्थी एकताले कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरु कोही पनि निराश हुने अवस्था पनि छैन र कोही निराश हुनु भएको पनि छैन ।
चुुनावमा तालमेल भइसकेको छ । चुनाव चिन्हले समस्या उत्पन्न गराउँछ भन्ने कत्तिको लाग्छ ?
– बामपन्थी तालमेलको पक्षमा सुरुवातदेखि नै म लागिरहेको मान्छे हो । केपी ओली सरकारको पालामा पनि यो ढाल्नु हुँदैन, अब यहाँबाटै बाम धु्रविकरण गर्नु पर्छ भन्ने मान्छे म पनि हुँ । त्यसैकारण यो चुनावमा एउटै चुनाव चिन्ह लिएर जाँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हामी सबैलाई लागेको थियो । तर, पार्टी एकीकरण भई नसकेको अवस्थाका कारण निर्वाचन आयोगमा भोली कानूनी जटिलता उत्पन्न हुन्छ भनेर त्यो हुन नसकेको हो । तर, एमाले सूर्य र माओबादी गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा चुनाव चिन्हमा उठेपनि त्यहाँ कसैले पनि घातअन्तरघात गर्ने छैन । किन की भोली एमाले र माओबादी एक हुँदैछन् । एमालेलाई माओबादी र माओबादीले एमाले भनेर हराउने खेल हुने छैन जस्तो लाग्छ । तसर्थ चुनाव चिन्ह कै आधारमा समस्या उत्पन्न हुन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन । किनकी भोली एमाले र माओबादीबीच एकता हुने प्रक्रियामा छन् ।
तपाईंले भन्न खोज्नु भएको एमालेले गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा र माओवादीले सूर्यमा भोट हाल्छन् ?
– हो, भोली हामी एउटै बन्न लागेका छौं । कानुनी जटिलताका कारणमात्र अहिले एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्न समस्या भएको हो । एमालेले गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा र माओवादीले सूर्यमा भोट इमान्दार भएर हाल्नु पर्छ । गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा पनि हाम्रै हो, सूर्य पनि हाम्रै भन्ने भन्ने आम कार्यकर्ताहरुमा भावनाको विकास गर्नु अतिआवश्यक छ ।
सरकारबाट माओवादीका मन्त्रीहरुलाई हटाउने कुरा आइरहेको छ । यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
– हामीले भनेको त चुनाव यही सरकारले गर्ने हो, हामी देउवा सरकारलाई समर्थन दिइरहन्छौँ । तर, पार्टी एकता गर्ने वा पार्टीमा तालमेल गर्ने भनेको त फरक कुरा हो नि ! उहाँहरुले पनि त जोजोसँग मिल्छ, तीतीहरुसँग तालमेल गरेकै हो । हामीले जोसँग मिल्छ त्योसँग गरेका हौं । यो सरकारबाट हट्ने र हटाउने समय होइन । यसमा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताले नदिने कुरा नि बताइसकेको छ ।
यो चुनावमा एमाले र माओवादीको तालमेल जनताले रुचाउलान् त ?
– एमाले र माओवादी मिलिसकेपछि बहुमतको सरकार बनाउन अब कसैले रोक्न सक्दैन । ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनमत बामपन्थीहरुमा छ । स्थिर सरकारका लागि बामपन्थीहरुलाई आम जनताहरुले अत्याधिक मत दिएर जिताउनु हुनेछ । हामीलाई के विश्वास छ भने हामीले नेपाली समाजमा जुन संविधान बनायौँ, त्यो संविधान हाम्रै नेतृत्वमा लागु गर्ने गरी जनमत हाम्रो पक्षमा आउँछ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।
तपाईंलाई माओवादीले मोरङ क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा सर्वसम्मत नाम सिफारिस गरेको छ । टिकट पाउने सम्भावना कतिको छ ?
– यस्तो हो, टिकट भने आवश्यकता अनुसार पाउने कुरा हुन्छ । एमाले र माओवादीले छुट्टाछुट्टै लड्दा साविक मोरङ क्षेत्र नं. १ बाट चुनाव लडिसकेको मान्छे हो, म । एमालेका साथीहरुसँग छलफल गरेर टिकटको छिनोफानो हुन्छ । जो उठे पनि ठूलो कुरा भएन, एमाले र माओवादीमध्ये एक जना ब्यक्ति उठ्ने कुरा हो । जो उठेपनि हाम्रै ब्यक्ति उठ्नु हुनेछ । एमाले र माओवादीले इमान्दार भएर शतप्रतिशत सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
तपाईंलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यमा सिफारिस गरेपनि मोरङ क्षेत्र नं. २ (क) तर्फबाट प्रदेशसभाको उम्मेद्वार बनाउने माओवादी बृत्तमा चर्चा छ नि ?
– हिजो प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा उम्मेद्वार बनिसकेका कारण मेरो चर्चा हुनु स्वभाविक हो । पार्टीले जुन जिम्मेवारी दिन्छ, त्यो हामीले इमान्दार भएर पूरा गर्नु पर्छ । एमाले र माओवादीबीच बसेर छलफल गरेर उम्मेद्वारको टुंगो लगाइन्छ ।
मोरङमा एमाले र माओवादीबीच कसरी उम्मेद्वारको बाँडफाँड गर्ने बिषयमा छलफल भइरहेको छ त ?
– मोरङ जिल्लामा दुई प्रतिनिधिसभामा माओवादीतर्फ उम्मेद्वार बन्ने र प्रदेशमा ४÷५ जना उम्मेद्वार बन्ने बिषयमा करिब करिब टुंगो लागेको अवस्था छ । त्यस बिषयमा चाँडै नै निर्णय हुनेछ ।
– अहिले ऐतिहासिक तालमेल गरेका छौं । विभिन्न कुराहरु आइरहेको छ । हिजो एमाले र माओवादी झगडा गरेर आएका पार्टी कसरी एक हुन सक्छन् भन्ने कुराहरु बाहिर आएका छन् । त्यसमा विचलित नभई अब त्यसलाई घर झगडा सम्झेर अब एक भएर अघि बढ्नु पर्छ । झगडालाई बिर्सेर अब विगठन होइन संगठित हुनुको विकल्प पनि छैन । एमाले र माओवादीबीच सुमधुर सम्बन्ध विकास गर्नु पर्छ । अनिमात्र तालमेल र एकतालाई सफल बनाउन सक्छौं । हामी स्थिर दुर्ई तिहाईको सरकार बनाउन सक्छौं । त्यसैकारण अब समाजवादी क्रान्तिका लागि एमाले र माओवादी मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प पनि छैन ।